Kenya oo sheegtay in ay balaarin doonto duqaynta cirka ee ay ka fuliso xaruumaha Al-shabaab – Radio Daljir
Nofeembar 1, 2013 3:52 b 0
Kismaayo, November 1, 2013? – Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay duqaysay gelinkii dambe ee khamiistii shalay xaruun ay ku tababartaan ururka Al-shabaab oo ku taala Jubba hoose, weerarkaas ayey Kenya sheegtay in ay ku dishay rag badan oo ka tirsan Al-shabaab.
Afhayeen u hadlay meleteriga dalka Kenya ayaa sheegay in halka ay duqeeyeen ay tahay goob in ay badan ku raad-joogeen, isagoo sheegay in halkaas tababar uga socday in ka badan 300 oo ka tirsan Al-shabaab, Kenya waxaa ay xustay in aysan hayn tiro rasmi ah balse ay dhinteen inta badan xubnaha xerrada joogay.
Wakaalada wararka Reuters ayaa soo xigatay saraakiisha Kenya, Afhayeenka u hadlay meleteriga Kenya waxaa uu iclaamiyey in ay sii wadi doonaan duqaynta ay ka geysanayaan meelaha ay joogaan Al-shabaab ee Soomaaliya, iyagoo u aargudaya dadkii lagu laayey Westgate mall ee Nairobi.
Docda kale ururka Al-shabaab ayaa si cad u beeniyey in ay Kenya duqaysay xero tababar oo ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Afhayeen aan isna magaciisa la shaacin oo u hadlay Al-shabaab, waxaa uu sheegay in ay weerareen xaruun ay ciidanka Kenya ku leeyihiin deegaanka Badhaadhe ee Jubbada hoose.